Savings.Com - Fitness Rebates with Your Health and Fitness New Year Resolutions
घर » ब्लग » Savings.Com संग तपाईंको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य नयाँ सालों को संकल्प सहेजें
जनवरीको अन्तको साथ धेरै नयाँ वर्षको प्रस्तावहरूको अन्त्य हुन्छ। हामी त्यहाँ त्यहाँ छौँ: तपाईंले 2019 लाई एक बलियो नोटमा सुरू गर्नुभयो, कडा परिश्रम गर्ने र राम्रो खाना खाएको र अधिक किताबहरू पढ्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर अचानक, यो फेब्रुअरी हो। सशक्त शासनहरू मरेका छन्, सुपर बाउल सप्ताहांतमा पुग्छन्, र कसैलाई तपाईं आफ्नो पुरानो बानीहरूको स्वागत स्वागत हातमा फर्किनुहुन्छ।
यदि त्यो चिन्ता लाग्दछ भने, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईंसँग अझै पनि तपाइँको सबैभन्दा राम्रो वर्षको लागि गियर अप गर्ने समय छ।
तपाईंको एक्सएनएनएक्सएक्स रिजर्भेसनहरू स्पष्ट लक्ष्यहरूमा बदल्नुहोस्।
तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खोज्दै र फिटनेस लक्ष्यहरू पछ्याउन तपाईंको वालेटमा एक टोल लिन सक्छ। भिटामिन र पूरक, ताजा भोजन र जिम सदस्यता महसुस गर्न सुरु हुन्छ, विशेष गरी एक पटक उनीहरूको नयाँ वर्षको प्रचार।
प्रेरणा पनि जलाउँछ। तपाईंको व्यायाम बाइकले तपाईंलाई चकित पार्ने जस्तो महसुस गर्न सुरु गर्न सक्छ, र त्यो ट्रेडमिलले सानो धूल प्राप्त गर्न सुरु हुन सक्दछ।
हामीसँग केहि सरल समाधानहरू छन् जुन तपाईंको सजिलो पुन: पत्ता लगाउन सजिलो बनाउन र तपाईंको नयाँ फिटनेस बानीहरूमा रहन सजिलो बनाउनेछ - बैंकलाई ब्रेक बिना।
नयाँ चीजको एक खुराक कोसिस गर्नुहोस्।
विविधता जीवन को मसाला हो, किनकि उनि भन्छन्, र यो तपाईंको workouts को लागि पनि जान्छ। यदि तपाईंको पायलटहरु दिनचर्या सुस्त महसुस गर्दैछ भने, किकबक्सिङ वा तातो योगाको सट्टामा चीजहरू परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं आफ्नो मांसपेशी टोन सुधार गर्न र तपाईंको इच्छाशक्ति सुधार गर्न नयाँ फिटनेस चुनौती के गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए यदि यो हालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो विन्टरहरूको हो? सानो सख्त मौसमले तपाईंको सक्रिय लक्ष्यहरू पछ्याउन नदिनुहोस्। यी जाँच गर्नुहोस् ठोस आउटडोर गियर ब्रान्डहरूबाट स्कोर माउन्ट वेयरहाउस र क्याम्पमोर जस्तै, जहाँ तपाइँलाई स्किमको लागि एकदम जोडा, मौसमको तम्बू वा एथलेटिक कोट भेट्टाउन सक्नुहुनेछ तपाईलाई सार्नको लागि, सिजनमा कुनै फरक पर्दैन।
Smartwatch को पावर खोज्नुहोस्।
कहिलेकाँही, हामी सबैलाई प्रविधिबाट धक्का चाहिन्छ। जब तपाईंको कलाई ग्याजेट केवल तपाईं मात्र बताउन सक्नुहुन्न, तर तपाईंको हृदय दर, तपाईंको दैनिक चरणहरू, तपाईंको गतिविधि स्तर र तपाईंको अनुस्मारकहरूको ट्रयाक राख्नुहोस्, तपाइँ उत्प्रेरित गर्न उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ र तपाइँको फिटनेस यात्रामा ध्यान केन्द्रित रहनेछ।
हाम्रो स्वास्थ्य र कल्याण खरीदारी गाइड तपाइँलाई जम्पस्टार्टले तपाईंलाई 2019 लक्ष्यहरूमा पुग्न मद्दत पुर्याउन, सर्वोत्तम मूल्य मूल्यहरूमा शीर्ष-मूल्याङ्कित गियरको साथ दिन्छ।
तपाईंको कसरत गियर गेम माथि।
उत्साहित एथलेटिक कपडाहरूको कमीले तिमीलाई पार्यो? सरल परिवर्तनहरू जस्तै तपाईंको रनको साथ उज्ज्वल गर्दछ स्नर्सको नयाँ जोडा वा तपाईंको रोटेशनमा नयाँ टैंक माथि थप्दै तपाईंको प्रेरणालाई सुधार गर्न सक्छ।
बिना स्नुज मारेर बिछाउबाट बाहिर जानुहोस् र सट्टामा जिम हिड्नुहोस्। तपाईंले उच्च गुणस्तर कसरत पोशाकमा ठूलो बचत गर्न सक्नुहुनेछ, जबसम्म तपाइँ एक लाख रुपैयाँ जस्तो देखिन्छ। अगाडि जानुहोस्, के केक छ र यसलाई पनि खान्छ (ठीक छ, लगभग)।
आफ्नो ध्वनि अद्यावधिक गर्नुहोस्।
के तपाईंलाई थाहा छ कि संगीतले तपाईंको कसरत गतिलाई असर गर्छ? तपाईले 120 bpm-माइकल जैक्सन द्वारा सोच्नुहोस् "बिलिय जीन" को वरिपरि तपाईंको न्यानोअप सुरु गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो गति मेल गर्न 130-160 बीपीएम बाट लिएर तपाईको गतिविधिमा निर्भर गर्दछ।
एक छिटो गीतले तपाइँलाई तपाइँको दैनिक दौडहरूमा रेकर्ड-ब्रेक गर्ने समयलाई धक्का दिन सक्छ, जबकि तीव्र, मध्य-गति गीतले तपाइँलाई वजन-लिफ्टिङ र कोर बल निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको संगीत ताजा गर्नुहोस्, आफ्नो मानसिकता ताजा गर्नुहोस्।
थप विचारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? Savings.com कूपनको एक अन-अद्यावधिक चयन छ र तपाईंको वालेट, र तपाईंको प्रस्तावहरू बचत गर्न छुटेको छ।